Sanbaloolshe Ma keeni karaa Nin reerka oo dhan isku raacsan yihiin? - Latest News Updates
Sanbaloolshe Ma keeni karaa Nin reerka oo dhan isku raacsan yihiin?
Abdullahi Mohamed Ali “Sanbalolshe” wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in taladda iyo hogaanka dalka Soomaaliya loo daayo reerka uu ka dhashay kaliya.
Anagoo og in hogaanka dalka lawada leeyahay oo hogaankaasi dalka uu ku imaanaayo cod bixinta guud ee umadda Soomaaliyeed, kaba soo qaad inaan ku raacno rabitaankiisa oo aan ka codsano “ bal nin reerkaaga ah oo aad isku raacsan tihiin keena idinkoo wada jir ah waana idiin tanaasuleeynaa”
Malaga yaabaa in reerka uu ka dhashay oo dhan ay isku raacaan hal nin oo hogaan noo noqdo? Hadaan si waaqici ah u hadalno waxaa hubaal ah in Sanbaloolshe ayku adkaaneeyso inuu keeno ninka reerkiisa isku raacsan yihiin. Runtii arintaas reerkiisa kaliya kama taagno oo waxay ka dhex jirtaa beelaha Soomaaliyeed oo dhan way adag tahay In la helo qof ay iskuwada raacasan yihiin.
Arimahaan oo dhan waxay ku tuseeysaa inuu qabiilka yahay mid lagu rati kacsado, ka soo qaad kuwa xildhibaanada magaca qabilka ku fadhiya Golaha sharci dejinta, ma jirto mid dadkiisa xaaladooda wax ka og oo dib ugu laaban karo degaanka uu ka yimid oo qaarkood aan ka warqabin nololoshooda iyo dadka degaanka oo hoteelo maxbuus sharaf ku ah.
Aniga waxay ila tahay In hogaanka dalka laga daayo YAA TAHAY, ee loo gudbo YAA MUDAN.
Hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed ee dhibkaan fog ka yimid ee doonaaya inay dhistaan Qaran ku dhisan sharci iyo Dastuur oo qofkataa oo muwaadin ah u balan qaadaayo inuu helo wuxuu xaqa u leeyahay waa inaan ku fikirnaa YAA MUDAN oo dalkaan iyo dadkiisa samatabixin kara waqtiga adag ee lagu jiro.
SANBALOOLSHE SOO SHARAX NINKAAD WADATO LAKIIN OGOOW GO’AAN QAADASHADDA HOGAANKA DALKA WAA MID AY SOOMAALIDA OO DHAN AY WADA LEEDAHAY:
Sheikhnor Abucar Qaasim